स्याङ्याजामा पञ्चेबाजा बजाएर किसानले रोपे सडकमै धान - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : मङ्गलबार, असार १६, २०७७११:०० पब्लिक आवाज /संवाददाता
स्याङजा, १६ असार । देशभर राष्ट्रिय धान दिवसको चर्चा चलिरहेका बेला स्याङ्याजामा भने यतिबेला पञ्चेबाजा बजाएर किसानले सडकमै धान रोपेको विषयले चर्चा पाएको छ । आफ्नो घर अगाडिको सडक वर्षौँ बितिसक्दासम्म पनि कालोपत्र हुन नसक्दा हिलाम्मे सड्कबाट आजित भएका स्थानीयवासीले सडकमै धान रोपेर साङ्केतिक विरोध जनाएका छन् ।
४ बर्ष पछि खुल्यो तातोपानी नाका, बढ्दो चहलपहल !
अनुदान रकम अनियमितता भएपछी इटहरीका किसानले अख्यितारको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराए !
घुस र चाकडी गर्न नसकेको पत्रमा उल्लेख गर्दै विरअस्पतालका न्युरो सर्जन डा. अधिकारी द्वरा राजीनामा